Weather in Thailand in ~ ~ Journey-Assist - Inona no atao. Humidity. hafanana
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Toetany sy toetrandro any Thailandy » Weather in Thailand tamin'ny Aprily
Weather in Thailand tamin'ny Aprily
Ny afovoan'ny lohataona any Thailandy dia ny haavon'ny vanin-taona mafana. Any amin'ny ankamaroan'ny firenena, dia misy orana kely. Ny haavon'ny rivotra dia avo indrindra, indrindra any amin'ny faritra avaratra sy afovoany, izay tsy mora ny rivotra amin'ny ala tropikaly. Amin'ny fomba ofisialy, tsy raisina ho «vanim-potoana ambony» ny aprily: any amin'ny faritra atsimo dia orana matetika, na dia tsy ela aza, ary ny avaratra dia mafana be. Ny fihenan'ny mpizaha tany dia tsapa voalohany indrindra amin'ny hotely sy ny fizahan-tany malaza. Manararaotra indrindra ny manofa trano amin'izao fotoana izao, mihena ny vidin'izy ireo raha ampitahaina amin'ny tahan'ny "ririnina".
Ny fepetra amin'ny Aprily
Aprily azo antsoina hoe azo antoka fa iray amin'ny vanim-potoana mafana indrindra amin'ny taona, indrindra amin'ireo faritany avaratra ao Thailand, izay amin'ny tolakandro, ny rivotra matetika mamaivay hatramin'ny +36 degre ary etsy ambony. Amin'ny toe-javatra toy izany, ny fantsom-pahavitan'ny rivotra ao anaty efitrano sy dobo fandroana dia tena ilaina. Ny alina amin'ity faritra ity dia hahafaly anao ny fahatsapana, amin'ny takariva dia mihena hatramin'ny +20 degre ny thermometer.
Ny toe-piainana mitovy amin'izany dia azo jerena amin'ny tapaky ny lohataona sy any amin'ny faritra afovoan'ny firenena. Any Bangkok, amin'izao fotoana izao, ny mari-pana mandritra ny andro dia mihena hatramin'ny +38 degre etsy ambony, ary ny tanàna azo tsapain-tanana dia mivadika manodidina ny renivohitra ho fitsapana sarotra. Raha te-hifankahalala amin'ny renivohitra ianao amin'izao fotoana amin'ny taona izao, dia tsara indrindra ny mandeha amin'ny fitsangatsanganana vao maraina, indrindra fa satria ny ankamaroan'ny be pitsaboana dia manomboka ny asany amin'ny 8:00, ny sasany aza talohan'izay. Any amin'ny morontsirak'i Pattaya, ny rivotra dia mahatratra hatrany amin'ny +32 degre mandritra ny andro, ary ny + ranomasina ny mari-dranomasina dia +30 degre.
Any amin'ny morontsiraky ny Ranomasimbe Andaman, indrindra any amin'ireo nosy Chabi, tamin'ny volana Aprily, ny orana mafana dia mirotsaka amin'ny orana tsy dia fahita firy nefa be. Maharitra adiny 2-3 eo ny orana, aorian'izay dia mamiratra indray ny masoandro. Ny ranomasina eo afovoan'ny lohataona dia manafana hatramin'ny + 30 ... + 31 degre. Afaka milomano amin'ny ranomasina somary milamina ianao, amin'ny andro sasany, fa matetika misy onja mahery sy rivotra mahery eo amoron-dranomasina. Tsy mihatra amin'ny volana Aprily ny taona, mahazo aina miala voly amin'ny tora-pasika.
Ny toe-javatra somary hafa kely dia mivoatra any amin'ny morontsiraka atsinanan'i Thailand ao amin'ny Hoalan'i Thailand. Ao amin'ireo nosy Phangan, Samui sy Tao, ny rivotra dia mahatratra hatramin'ny +32 degre mandritra ny andro, ary ny ranomasina - hatramin'ny +29 degre. Ny rivotra mangatsiatsiaka avy any amin'ny hano no mampitombo ny haavon'ny fiononana any amoron-tsiraka. Na eo aza ny toetrandro mahafinaritra, ny isan'ny mpizahatany amin'ny fotoana amin'ireo nosy dia tsy be dia be, ny ankamaroan'ny moron-dranomasina dia 50% fotsiny, ary ny orana fohy dia mitondra fahatsorana bebe kokoa.
Endrika fitsaharana amin'ny volana aprily
Marihina ny volana aprily, voalohany indrindra, ho an'ny iray amin'ireo fialan-tsasatra tena tian'ny mponina eo an-toerana, izay antsoina hoe Songkran, na taom-baovao Thai. Amin'ny fomba ofisialy, ankalazaina ny 13 ka hatramin'ny 15 aprily, fa any amin'ireo faritany samihafa ao amin'ny firenena dia afaka mihetsika ao anatin'ny 2-4 andro ny datin'ny Taom-baovao. Tena mampientam-po sy mahafinaritra ny fialan-tsasatra, izay tsy fahita firy ho an'ny Thais, satria ny iray amin'ireo toetra mampiavaka ny olom-pirenen'ny Fanjakana dia heverina ho toe-tsaina mangina. Mandritra ny fialantsasatra dia mahazatra ny mandatsaka rano amin'ny tsirairay avy ary maniry ny tsara vintana amin'ny taona vaovao.
Aiza kokoa ny miala sasatra any Thailandy ny volana aprily?
2 andro (41.8 mm.)
10 andro (139.0 mm.)
2 andro (30.3 mm.)
5 andro (97.0 mm.)
6 andro (68.4 mm.)
10 andro (139.1 mm.)
10 andro (139.3 mm.)
2 andro (28.0 mm.)
13 andro (146.1 mm.)
10 andro (139.2 mm.)
11 andro (143.5 mm.)
11 andro (135.1 mm.)
5 andro (66.7 mm.)
10 andro (125.9 mm.)
10 andro (142.0 mm.)
11 andro (144.9 mm.)
7 andro (84.2 mm.)
6 andro (110.4 mm.)
9 andro (126.4 mm.)
5 andro (96.2 mm.)
5 andro (96.9 mm.)
10 andro (138.5 mm.)
10 andro (138.9 mm.)
8 andro (99.9 mm.)
6 andro (107.9 mm.)
6 andro (67.2 mm.)
9 andro (116.3 mm.)
3 andro (43.6 mm.)
6 andro (111.7 mm.)
11 andro (138.1 mm.)
10 andro (138.6 mm.)
6 andro (66.9 mm.)
4 andro (93.0 mm.)
14 andro (147.4 mm.)
1 andro (26.3 mm.)
10 andro (128.1 mm.)
10 andro (139.7 mm.)
10 andro (126.1 mm.)
13 andro (167.9 mm.)
1 andro (28.0 mm.)
1 andro (25.9 mm.)
5 andro (96.4 mm.)
1 andro (32.2 mm.)
7 andro (88.3 mm.)